Kenya dia manitatra ny tsy fahazoana mivezivezy, mandràra ny fivorian'ny besinimaro rehefa mitifitra ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Kenya Breaking News » Kenya dia manitatra ny tsy fahazoana mivezivezy, mandràra ny fivorian'ny besinimaro rehefa mitifitra ny COVID
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny fahasalamana ao Kenya Mutahi Kagwe
Ny isan'ireo aretina dia nitombo isan'andro satria mpanao politika, iray taona miala ny fifidianana ankapobeny, dia mitarika fihetsiketsehana goavambe manerana ny firenena.
Fitomboan'ny tranga COVID-19 vaovao any Kenya.
Kenya dia manitatra ny ora tsy mandeha amin'ny alina manerana ny firenena.
Nanjary tototry ny trangana virus coronavirus ny hopitalin'i Kenya.
Kenya ny Minisitry ny fahasalamana Mutahi Kagwe dia nanambara androany fa ny firenena Afrikana Tatsinanana dia manome fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ary mandrara ny fivorian'ny besinimaro sy ny fivoriana manokana ataon'ny olona hanakanana ny fielezan'ny COVID-19.
Kenya, tato anatin'ny andro vitsivitsy, dia nanatri-maso fitomboan'ny tranga COVID-19 vaovao avy amin'ny variant Delta, miaraka amin'ny taha positivity 14 isan-jato hatramin'ny zoma raha ampitahaina amin'ny fito isan-jato tamin'ny volana lasa teo.
“Mihantona avokoa ny fivorian'ny besinimaro sy ny fivoriana ataon'ny olona na inona na inona karazana. Mikasika izany, ny governemanta rehetra, anisan'izany ny fivorian'ny governemanta sy ny kaonferansa, dia tokony havadika ho virtoaly na ahemotra ato anatin'ny 30 andro, ”hoy i Kagwe tamin'ny lahateniny tamin'ny fahitalavitra ny zoma teo, nampitandrina fa manjary tototry ny hopitaly ny firenena.
Nilaza izy fa atahorana hitombo hatrany ny tahan'ny fahatsapana fa tsy misy fepetra raisina.
"Manohy miangavy ny Kenyana rehetra izahay, ao anatin'izany ireo nahazo vaksinin'ny COVID-19, mba tsy hiambina azy ireo", hoy i Kagwe taorian'ny fivoriana nataon'ny Komity Nasionaly momba ny valinteny ho an'ny Coronavirus.
Kenya dia teo ambanin'ny karazana curfew sasany nanomboka ny volana martsa tamin'ny taon-dasa izay nitrangan'ny areti-mandringana voalohany, ary nilaza i Kagwe fa hitarina manerana ny firenena manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina any an-toerana mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka.
Tahaka ny maro amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy, Kenya dia nandray fepetra haingana tamin'ny COVID-19 tamin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, namepetra ny hetsika ary nanidy sisintany sy sekoly.
Saingy ny isan'ny aretina dia miakatra isan'andro satria mpanao politika, herintaona miala amin'ny fifidianana ankapobeny, dia manao fihetsiketsehana goavambe manerana ny firenena.
Niadana ny famoahana vaksinina tany Kenya, ny ampahany noho ny tsy fahampian'ny famatsiana.
Kenya dia nanao vaksiny olona 1.7 tapitrisa, izay 647,393, na 2.37 isan-jaton'ny olon-dehibe, dia vita vaksiny feno.
Raha atambatra, Kenya dia nandrakitra tranga maherin'ny 200,000 COVID-19 ary maty 3,910.
fampitandremana fa manjary tototry ny hopitaly.